သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ KNU ၊ RCSS/SSA နဲ့ DKBA ခေါင်းဆောင်တွေ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံကြစဉ်
Photo: Nyo Ohn Myin Facebook
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA နဲ့ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် DKBA တို့ဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
လက်မှတ်ထိုးရေးအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ အကြီးတန်းအကြံပေးအရာရှိ ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောပါတယ်။
"၁ဝ ကြိမ်မြောက် NCA ညှိနှိုင်းပွဲပေါ့၊ အဲ့ညှိနှိုင်းပွဲမှာ ကျနော်တို့ညှိရမယ့် စာချုပ်အနေနဲ့ကတော့ စာချုပ်ကြီးထဲ မှာ ဖြည့်ဖို့မရှိတော့ဘူး၊ စာချုပ်ရဲ့ဘေးမှာ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ညှိဖို့ ၃ ချက်ပဲကျန်တော့တယ်၊ အဲ့ ၃ ချက်ပြီးရင်တော့ စာချုပ်ကပြီးသွားပြီဗျ၊ ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ဒါကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး နောက် framework meetings ကို ဆက်လုပ်နိုင်ရေးနဲ့ နောက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာကို လာဆွေးနွေးတာပါ"
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ KNU ဥက္ကဌ မူတူးဆေးဖော ၊ RCSS/SSA က ဗိုလ်မှုးကြီး စိုင်းလှ ၊ DKBA က ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် စောမိုရှေး စတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
လာမယ့် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ပြန်လည်ကျင်းပမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် အချောသတ်အတွက် အချက် ၃ ချက်ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချက်တွေ ဆွေးနွေးလို့အောင်မြင်ခဲ့ရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တော့ မှာဖြစ်သလို စာချုပ်မှာ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြမယ့် အသိသက်သေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ဖို့ကိုလည်း ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Aug 03, 2015 10:13 PM
ကေအန်ယူနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရိုသားစွာနဲလို၂လား၂လိုခြင်တယ်၊ ကေအိုင်အေနဲ့အချို့က Peace ကို အမြတ်ထုတ်ပီး UNFA ခေါင်းစဉ်တတ်ရှေတန်းတင်ပီး မရိုးမသားကစားနေကြတယ်
Aug 03, 2015 09:03 PM
Aug 03, 2015 07:34 PM
What KNU did again with U Thein Sein with out SD as UNFC. Very shameful. Han Yawng Wei who earned money long time to used Myanmar and Ethnic group from EU. He also sold Myanmar politics for himself.
Aug 03, 2015 11:42 AM
UNFC ဆိုတာ ကေအိုင်အေနဲ့သူပထွေးက လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးဗျူဟာပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုစစ်ပြိုင်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ြပြိုကွဲဖျက်ဆီးအောင်ဆင်ထားတာပါ။ နိုင်ငံရေးနားလည်သူတိုင်းသိပါတယ်၊အခုကSDကကေအိုင်အေဆင်ထားတဲ့အကွက်ထဲလိုက်ကနေရတာပါ
Aug 03, 2015 07:40 PM